Ny Fitadiavana Ny Ara-Dalàna Sarany Lafo Loatra. Miezaka Takatry ny Torohevitra araka ny Lalàna amin'ny alalan'ny Finday - Ny mpisolovava ao Shina. Shinoa rehetra ny mpisolovava an-tserasera.
Ny Fitadiavana Ny Ara-Dalàna Sarany Lafo Loatra. Miezaka Takatry ny Torohevitra araka ny Lalàna amin'ny alalan'ny Finday
Ny ankamaroan'ny olona dia miady mafy mba manam-bola ny fampanoavana ao anatin'ny fotoana ilàna izanyNa dia tsotra ny resaka ara-dalàna foana cost mitana vola ao saram fotsiny ho an'ny voalohany toro-hevitra. Naka torohevitra araka ny lalàna nandritra ny finday avy amin'ny fampanoavana dia takatry ny fomba tsy mahazo ny toro-hevitra dia mila ihany koa fa mahazo tari-dalana momba ny fomba hiatrehana ny olana sy ny mety ho vidin'ny anjara. Ny Fampanoavana koa dia mety ho afaka hanampy anao eo amin'ny fiatrehana ny olana amin'ny ampahany ny vola lany amin'ny filazana Mafy ny fahazoan-dalana. Indrisy anefa fa ny ankamaroantsika dia tokony hitady torohevitra araka ny lalàna amin'ny fotoana sasany, mandritra ny fiainantsika. Maro amintsika fihaonana fianakaviana olana (toy ny fisaraham-panambadiana na ny ankizy ny olana) izay dia mitaky ara-dalàna ny toro-hevitra sy fanampiana. Ny ankamaroantsika dia amin'ny fotoana sasany manana mpanjifa lalàna io olana io isika rehefa mahatsapa ny zo mety ho vaky avy amin'ny mpamatsy na orinasa, na mila torohevitra momba ny asa ny olana toy ny fandroahana tsy ara-drariny na mandoa ny olana. Ny sasany amintsika manana olana amin'ny tenancy olana toy ny disadisa amin'ny tompon-tany, na amin ny mpanofa. Mandritra izany fotoana izany dia zava-dehibe ny mahatakatra ny zo ara-dalàna, ary izany dia mitaky ny fidirana ho azo antoka sy araka ny tokony ho ara-dalàna ny torohevitra momba ny fomba hiatrehana ny toe-javatra. Toy izany ny toro-hevitra dia ny tsy sarobidy izany dia zava-dehibe. Na izany aza, ity toro-hevitra, dia matetika loatra ny avy lavitra (indrindra indrindra noho ny vidiny) manakana ny fidirana any amin'ny fitsarana. Isika no mandre ny tantara ny fotoana sy ny fotoana indray - dia tsy manam-bola ny fampanoavana ary noho izany dia niezaka ny hanao izany irery. Matetika loatra raharaham-barotra lehibe, ny orinasa, ny orinasa ny tompontrano sy ny hafa dia ny fanararaotana ny toerana sy ny fahefana mba manararaotra ny olona tsirairay amin'ny tsy firaharahiana ny adidy ara-dalàna eo amin'ny faritry fa ny ankamaroan'ny olona dia tsy ho afaka handoa ny fahazoan-dalana' sy ny mpisolovava' saram mba hiarovana ny tenany. Fahazoan-dalana dia zara raha niandraikitra latsaky ny £ph ary matetika mihoatra ny £ ny ora Ary izany dia marina ho an ny fotoana izy ireo mandany aminao sy amin'ny antontan-taratasy. Izany dia tsy ahitana ny vesatra fanampiny ho an'ny taratasy sy ny fitantanana ny vola lany izay matetika no maka ny vola lany be ambaratonga ambony kokoa noho ny olona iray dia afaka manam-bola ara-drariny. Na izany aza, ny sasany fahazoan-dalana hahatakatra izany, ny tsy fitoviana sy ny manolotra ny fahafahana maka avy hatrany sy takatry ny ara-dalàna ny toro-hevitra ary fanampiana amin'ny alalan'ny finday. Izany no zava-dehibe fa ny vola lany ny famangiana ny fampanoavana ao amin'ny birao dia tsy hisakana anao tsy hahazo ny matihanina ara-dalàna ny toro-hevitra sy ny fitadiavana na ianao na tsy manana raharaha ary ny fomba hiatrehana izany. Tsy tokony hahatsapa tahotra na hatahotra ianao, raha nahita ny tenanao ao amin'ny mahazatra ara-dalàna ny toe-draharaha ho tojo assertive mpisolovava izay manao fangatahana ny fampiasana sarotra, ary nandrahona ny ara-dalàna araka ny fiantso. Nandray ara-dalàna ny toro-hevitra avy amin'ny fampanoavana amin'ny telefaonina dia manome anao ny takatry ny fomba tombony azo ampiharina ny fahatakarana ny zava-misy. Misy fahazoan-dalana izay manolotra torohevitra araka ny lalàna amin'ny alalan'ny finday ny olona mba hanampy azy ireo karazana toe-javatra, ary ho toy ny kely toy £ minitra.
Miresaka mahay fampanoavana ny traikefa tsara amin'ny fanampiana ny olona tahaka anareo.
Ny antso dia afaka ho toy ny lava na ho fohy araka izay tianao.
ianao dia handray ny toro-hevitra mifanaraka amin'ny zava-misy sy ny filàna, ary dia afaka mahazo fahalalana tsara ny zon'olombelona ao toy ny kely toy ny dimy ambin'ny folo amby roa-polo minitra.
Mety ho izay tianao, na mila mampiasa ny asa fanompoana nandritra ny isan'ny antso an-telefaonina e. raha tafiditra tao amin'ny fizotry ny tantara: tena izany no asa fanompoana izay mifanaraka aminao sy ny zavatra ilaina. Torohevitra araka ny lalàna amin'ny alalan'ny telefaonina, dia tsy takatry ny fomba hahatakatra ny toe-javatra sy ara-dalàna ny safidy, fa mety ihany koa. Ny ankamaroan'ny orinasa ny fahazoan-dalana mitaky fotoana ho namandrika herinandro mialoha, na dia eo aza ny ara-dalàna ny ankamaroan'ny toe-javatra atrehantsika ho tampoka naniry eo amintsika sy ny mitaky avy hatrany ny fahazavan-tsaina. Ny fotoana sy ny vola no lany amin'ny fandehanana, matetika mba tsidiho 'uninviting' fahazoan-dalana' ny birao, ary matetika ianao no hahita fa ny mpisolovava ireo lahateny anao fa tsy ho anao sy araka ny fiantso izay tsy tena takatrao.
Betsaka ny fanakianana ny fahazoan-dalana dia tsy manoro hevitra anao ny zo na ny fomba ianao dia afaka hamaha ny olana: fotsiny izy ireo hilaza aminao amin'ny ara-dalàna araka ny fiantso ny dingana izy dia mandany.
Ny mpanjifa matetika ravina ny biraon'ny fahazoan-dalana tsy hendry, fa rehefa nandeha in - manaiky fa mahalala fomba be dia be ny fampanoavana te-avy amin'izy ireo ny hiatrika ny olana. Raha tianao ny fifanakalozan-kevitra amin'ny fampanoavana izay eo amin'ny ambaratonga, dia manazava ny olana eo amin'ny fiteny dia afaka hahatakatra sy miteny anao ny safidy ho fiatrehana izany, dia mitady ara-dalàna ny toro-hevitra avy amin'ny fampanoavana alalan'ny antso an-tariby. Raha mila haingana indray mitopy maso ny zon'olombelona na misy amin'izao fotoana ara-dalàna ny toro-hevitra mba hanampy anao mitantana ny toe-javatra misy anao, hiezaka takatry, matihanina sy araka ny fiantso-poana ara-dalàna ny toro-hevitra avy amin'ny an-tariby. Ny olona sasany dia miezaka ny hitady ny valiny eo amin'ny aterineto rahateo ny zava-drehetra eo amin'ny tranonkala, tsy izany. Ireo izay manao ny lalàna tsy hamoaka toro-hevitra maimaim-poana amin'ny aterineto. Lalàna Orinasa matetika hamoahana lahatsoratra fohy 'levitra' ara-dalàna ny toro-hevitra momba ny olana manokana - izany dia tsy ny valin'ny olana. Ireo titbits dia nivoaka mba hiteraka fanontaniana an-mafy Mpisolovava aza manolotra maimaim-poana 'toro-hevitra sy fanampiana' afa-tsy ao amin'ny birao sy ny tava. Na dia toro-hevitra amin'ny alalan'ny mailaka"avy ny mpisolovava mahay"dia iharan'ny ny sarany sy ny toro-hevitra ihany ny maha-azo antoka tahaka ny fanazavana omena toro-hevitra ho an'ny tanjona. Matetika izany dia tsy ny fanontaniana izay nandry-ny olona mangataka toro-hevitra amin izay manan-danja - ny olana ao ambadiky ny fanontaniana ary dia tsy nanontany ny momba satria ny lay-olona matetika mahita ny olana, fa tsy ny hiteraka. Ny zava-misy dia tsy misy azo asolo ny hoe 'miaina ny fifanakalozan-kevitra' sy ny 'telephone ny toro-hevitra ny asa fanompoana' ianao mahazo ny hoe 'miaina ny fifanakalozan-kevitra' rehefa ilaina izany, ary tsy ny fanelingelenana ny 'birao fanendrena'. Eny tokoa, ny fandrosoana eo amin'ny ny teknolojia toy ny Paoma FaceTime na Skype (sy hafa) dia ankehitriny dia azo atao mba manana velona ny resaka teny lavidavitra teny fotsiny toy ny antso an-tariby fa ny amin 'mifanatri-tava' ny fifandraisana. Fa tsy hanahirana, ny hafainganam-pandeha sy ny affordability (na dia izany fotsiny ho an 'ny voalohany torohevitra' alohan'ny fahazoan-dalana nampianatra) ny antso an-tariby torohevitra ara-dalàna service dia manolotra mitana ny soa ho an'ny rehetra nandritra ny takatry ny vola. Adviceline tolotra manokana ara-dalàna ny toro-hevitra ny finday. Ny mahay fampanoavana dia manana mihoatra ny roa-polo taona traikefa amin'ny fanomezana mahitsy-miresaka tsy araka ny fiantso-dalàna ny toro-hevitra ary afaka mamaly ny fanontaniana momba ny fananana, ny mpanjifa sy ny fianakaviana, ny asa ary ny maro hafa koa ny olana ara-pitsarana conveniently sy haingana nandritra ny finday. Izany asa fanompoana enti-manampy ny olona amin'ny zava-misy sy ny takatry ny vola.
Fanohanana ny ankizy ao Shina
বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি আইনজীবীরা, আইন সংস্থাগুলো জন্য চীন মধ্যে, প্রতি সিটি